Umenzi weChina wokucoca ngeengxowa ezininzi kunye noMthengisi | Qiangzhong
Iifilitha zebhegi zisetyenziselwa ukucoca ukungcola emanzini, iziselo, kunye nolwelo lweekhemikhali. Iingxowa zeefilitha ziyafumaneka kwi # 1, # 2, # 3, # 4, njl., Kwaye ibhaskiti yesinyithi engenasici ifunwa njengenkxaso. Icebo lokucoca ulwelo linendawo enkulu yokuhluza, ukusebenza okuphezulu kokuhluza, ukusebenza ngokukuko kunye neendleko zokugcina eziphantsi. Ukuphakama kwesihluzi kuyahlengahlengiswa kwizicelo ezahlukeneyo.
Ukutya: iziselo, kunye notywala mveliso, ukuhlangabezana nemfuneko yococeko
Ukucocwa kweemveliso zepetrochemical kunye neekhemikhali
Ukucoca ulwelo kushicilelo, ifanitshala, njl.
Iiparamitha eziPhambili zezoBuchule zeFilitha yokungena yeBhegi
Iiparamitha zobuchwephesha eziPhambili zokucoca Ingxowa yokungena ephezulu
Ingxowa yokuCoca ulwelo
Uhlobo: isikhwama filter
Yesicelo: ulwelo ukuhluza
Izinto zeBhegi: PE / PP / enye
Ingxowa yesihluzi yolwelo eqhelekileyo yenziwe nge-PE (ipholiyesta) ifayibha, i-PP (i-polypropylene) yelaphu, okanye i-MO (monofilament) mesh. I-PE kunye ne-PP zizinto zokucoca-ntathu ezinzulu. I-100% yefayibha emsulwa iqhutywa ngenqindi yokubetha ngenaliti ukwenza umlinganiso wecala lokucoca ulwelo, oqhuphayo ophezulu kunye noxinzelelo. I-100% yefayibha emsulwa ifakwe ngenaliti kumacala-amathathu, anombala ocolekileyo ococekileyo kunye nochuku. Lubonakala lulwakhiwo olunemicu evulekileyo, olunokunyusa amandla okungcola. Esi sihluzo yimowudi yokusika kabini esusa ngokufanelekileyo amasuntswana aqinileyo kwaye athambileyo, avumela amasuntswana amakhulu ukuba abambeke kumphezulu wefayibha ngelixa amasuntswana amnandi ebambeke kubunzulu becebo lokucoca ulwelo. Iqinisekisa ukuba ayizukuqhekeka ngenxa yoxinzelelo olwandileyo ngexesha lokusetyenziswa kwaye inefiltration ephezulu yokusebenza kakuhle. Ukongeza, umphezulu ongaphandle womatshini lunyango lobushushu obuphezulu, oko kukuthi, itekhnoloji yokunyibilikisa kwangoko (unyango lwe-calendering), olunokuthintela ngokufanelekileyo imicu ekulahlekelweni sisiphumo esiphezulu sesantya solwelo ngexesha lokuhluza. Yiyo ke loo nto, ungcoliseko lwefiltrate ngenxa yesixokelelwano sefayibha kunye nokuvalwa kwesixhobo sokuhluza esibangelwe lunyango oluqhelekileyo kunokuthintelwa, kwaye ubomi bengxowa yokuhluza buyonyuswa. Ukongeza, lo mahluko woxinzelelo mncinci, ongachaphazeliyo inqanaba lokuhamba, kwaye ukuchaneka kwayo zii-1-200micron
MO yenziwe nge-nylon ejikelezayo engakhubazeki, elukelwe kumnatha ngokweenkcukacha ezichaziweyo, kwaye iba yintambo enye emva kokumiswa kobushushu. Lubonakala ngamandla aphezulu kwaye alunakukhubazeka ngenxa yotshintsho kuxinzelelo. Umphezulu womluki we-monofilament ugudile, kulula ukuwucoca, kwaye ungasetyenziselwa ukuphindaphinda. Kufanelekile ukuba ucofe ulwelo olunomxholo ophezulu wokungahlambuluki, onokuthi unciphise iindleko zokucoca, kunye nokuchaneka kwawo kungama-20 〜 550 mesh (25 ~ 840μm).
Izinto zokucoca ulwelo lwebhegi yokuhluza: isangqa sensimbi, iringi yentsimbi kwalenza, ipholiyesta / isangqa seplypropylene
Isixhobo: Ipholiyesta (PE), iPolypropylene (PP).
L = umgca-5 womthungo - izinto zeringi (intsimbi eqhelekileyo ebunjiweyo, intsimbi engenasici)
A = ingxowa 1, B = ibhegi 2, C = ibhegi 3, D = ingxowa 3
Indawo yokucoca: ibhegi 1 = 0.25, ibhegi 2 = 0.5, ibhegi 3 = 0.8, ibhegi 3 = 0.15
Ukunyamezelana ngokwemilinganiselo mm:> 0.3-0.8> 0.3-0.8> 0.3-0.8> 0.3-0.8
Ukucoca ulwelo (emva kwemini): 1, 3, 5,10,15,20,25, 50,75,100,150,200
Umahluko omkhulu wokuSebenza koXinzelelo lokuSebenza (MPa): 0.4, 0.3, 0.2
Ubushushu obusebenzayo obukhulu (° C): Ipholiyesta (PE): 130 (kwangoko i-180); Polypropylene (PO):
90 (kwangoko 110)
Isihluzi seNkqubo yokuSebenzisa
Egqithileyo Icebo lokucoca ulwelo lwangasese olunye-olusisiseko
Okulandelayo: Icebo lokucoca ulwelo Precision
ICartridge yokuCoca iMicropore
Icebo lokucoca ulwelo ndizayo Micropore
Isixhobo sokucoca iZindlu
ISetyhula Manhole yeSetyhula LIWI
Icebo lokucoca ulwelo lwangasese olunye-olusisiseko
Itanki lokuHambisa iKofu eliHambisekayo
I-500L evuselelayo yokusasaza itanki
Plate kunye nesakhelo lokucoca ulwelo
Itanki yokuGcina iMfono